Kutongwa kwemhosva iri kupomerwa kanzura weMDC Alliance, VaGodfrey
Kurauone, pamwe nemurwiri wekodzero dzevanhu, VaEpharaim Mtombeni, avo vanonzi vakanyomba mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa,
kwatadza kutanga kechipiri apo vachuchisi vati havana kugadzirira
Mutongi wedare, Muzvare Patience Madondo, vati kutongwa kwenyaya iyi kuchatanga musi wa 26 Gumiguru gore rino sezvo mapepa emhosva yevaviri ava akakiirwa muhofisi memukuru wevachuchusi uyo ange asipo pabasa.
Aka ndekechipiri hurumende ichitadza kuburitsa magwaro akakwana anopomera vaviri ava mhosva.
Gweta revaviri ava, VaMartin Mureri veZimbabwe Lawyers for Human Rights, vati vave kushungurudzwa nekuramba vachinzi vazodzoka kuti nyaya iyi itange kutongwa.
Nyaya iyi yakatada kutongwa zvakare mwedzi wapera apo vachuchusi vakakumbira kuti vanoda mwedzi wekutsvaga mvumo kuvakuru vavo kuti nyaya itange kutongwa.
VaKurauone naVaMtombeni, avo vanova mukuru wemabasa musangano re
Masvingo Centre for Research and Development, vari kupomerwa mhosva
yekunyomba VaMnangagwa apo vakaudza vanhu vaive vakamirira mabhazi e Zupco kuti vanhu vari kutambudzika munyika nepamusana pemutungamiri wenyika awondonga hupfumi hwenyika.
VaKurauone, avo vanove murongi wemisangano yevechiki muMDC, vakasungwa muna chikunguru vachipomerwa mhosva yekunyomba VaMnangagwa pamwe nekuvhiringa kufamba kwedzimotokari mumigwagwa.
VaKurauone vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kakawanda vakagara muhusungwa kwemazuva makumi mana nemaviri.
Asi nyaya yekuti vakavhiringa kufamba kwedzimotokari kuMashaba kuburikidza nekuratidzira kwavanonzi vakaita, yakaraswa nemutongi wedare ramajesitireti muMasvingo, Amai Patience Madondo, avo vakati humbowo hwakapihwa nehurumende hwekuroverera VaKurauone, hwainge husina kusimba.
Dzimwe nyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti hadzisi kufara nemaitiro ehurumende ekusunga vanhu isati yanyatsopedza kuferefeta mhosva dzinenge dzichipomerwa munhu.
Varwiri ava vanotiwo kushaikwa kwemapepa emhosva dziri kupomerwa VaKuraone naVaMtombeni nepamusana pekuti mumwe mushandi wehurumende haasi pabasa, zvinhu zvinozvidza matare edzimhosva pamwe nekuburitsa pachena kuti hurumende haina kurongeka.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kumahofisi evakuru vevachuchisi kuti seyi vasina kusiya vapa vachuchisi venyaya iyi magwara aya kana vaiziva kuti vanenge vasiri pabasa.